Nri na Sala | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Nri na Nri
Salad Star na ihe nduku maka 23 February
Ihe na 18.02.2019 18.02.2019
Mee ka nwoke gị nwee obi ụtọ na February 23 - Onye ọ bụla ga-anụ ụtọ ngwakọta kpokọtara nke ude chiiz, ejiji na galiki na tomato ọhụrụ. Ntọala crispy nke achịcha nduku ga-aghọrọ ihe nzuzo. ...
Diplomat salad: ngwa ngwa na tọrọ ụtọ
Ihe na 16.02.2019 16.02.2019
Mgbe ị gbalịsịrị otu ugboro, ị ga-esi nri salad "Diplomat" ugboro ugboro, na-enweghị ma ọ bụ na-enweghị oge. Ihe kachasị dị mfe ma dị oké ọnụ ahịa na-abịa nri dị mma, nke ga-aghọ ọkacha mmasị gị na ezinụlọ gị na ...
Sandwiches na sprats na kiwi na tebụl oriri - kwadebe maka oge 15
Ihe na 24.11.2018 24.11.2018
Kiwi, apụl na sprats - iju gị anya, ma eleghị anya, nchikota a na nhazi maka sandwiches. Ma anyị na-emesi obi ike na nri ndị na-eme nri na ihe ndị dị otú ahụ dị ụtọ. Ee, ha nwere piquancy, ma ọ dịghị ...
A na-eji azụ ose azụ na ose na oliv na mbụ
Ihe na 23.11.2018 23.11.2018
Ị maghị otú ị ga-esi ju ma ọ bụ ndị ọbịa ọbịa? Kedu akwụkwọ mpịakọta iji esi nri? Nwunye Herring nwere ike ịbụ eze nwanyị nke New Year table, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka a mara mma ma na-eri agụụ na ya. Ọ dịghị ihe mgbagwoju anya, ị ...
Ntugharị Afọ Ọhụrụ 2019: Sea Rhapsody na Tuna Salad - Ntụziaka
Ememe Krismas amalite na salads. Mee ka oge a bụrụ na ha ga-anọ na tebụl dị ka o kwere mee. Na mgbakwunye na Olivier Ọhụrụ Ọhụrụ, na-esi nri ndị ọzọ. Ụfọdụ ga-eji azụ ma ọ bụ ...
Nchịkọta maka ụkọ ọnwụ: salad na broccoli na oroma ihendori - uzommeputa
Ihe na 17.11.2018
Kedu ihe ga-eri nke dị otú ahụ iji kwụsị ibu ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị iji nweta ibu arọ? Nsogbu ebighi ebi nke ndị na-alụ ọgụ maka ihe osise. Ọ dị mma na ihe niile na-adọrọ adọrọ, ọtụtụ calorie dị ala, ma ọ dị mma ...
A salad na-enweghị Mayonezi dị ụtọ ma dị mfe!
Ihe na 03.11.2018
Kedu esi esi nri nri na-atọ ụtọ na-enweghị agbakwunye Mayonezi? Ọtụtụ ndị ga-azịza ajụjụ dị otú a na ọ gaghị ekwe omume, n'ihi na ngwaahịa kachasị mma maka mgbakwasa salad bụ Mayonezi, ọ bụ naanị ihe na-agaghị ekwe omume.
Ratatouille casserole salad - uzommeputa ngwa ngwa
“Ratatouille” (Ngwa - Provence, Cote d'Azur) Oge nkwadebe maka Ratatouille: Nkeji 30. Oge nri: nkeji nke 45. Efrata (maka mmadụ isii): Eggplant - 500g. Zucchini - 500g. Mmanụ oliv - ...
Kedu ka ị ga-esi esi nri carrots maka salad?
Ego ole ka ị chọrọ iji esi nri karọt maka salad? dụgwaa mma…. ọ bụrụ na ọ dị mfe, sie ike ogologo oge m ji esi nri na mpekere maka nkeji 7 n'ike zuru oke, m ga-eji mma were oge were ya. ọ bụrụ nro ọ dị njikere. ...
Kedu ọnwa nke kachasị mma caviar uhie?
Kedu ọnwa nke imeputa bụ ihe eji acha uhie uhie caviar kacha mma? N'ezie, caviar na-acha ọbara ọbara, ịkwesịrị ịzụta nke oge nrụpụta ya dara na Ọgọstụ, Septemba, ebe ọ bụ na n'oge a…
Kedu esi ehicha osisi apụl?
Kedu esi ehicha osisi apụl? Brine: na 10 l mmiri 2 nchịkọta shuga, ma ọ bụ mda, 3 st l nnu, 200 g ghee ntụ ọka. Brew ntụ ọka na nwuo na mmiri, ịgbanwee apụl na ahihia. ...
kedu ihe ị ga-esi esi nri onye a hụrụ n'anya maka nri abalị?
kedu ihe ị ga-esi esi nri onye a hụrụ n'anya maka nri abalị? Lee, e nwere ọtụtụ efere dị iche iche ebe a, ma eleghị anya ihe ga-abata na kemfe: http://otvet.mail.ru/answer/299656874/ http://otvet.mail.ru/answer/302286852/ http: // otvet. mail.ru/answer/296537452/ http://otvet.mail.ru/answer/296535133/ French anụ 1 n'arọ nke anụ ezi ma ọ bụ beef ...
Esi esi esi nri nduku, carrots, beetroot maka vinegreen?
Esi esi esi nri nduku, carrots, beetroot maka vinegreen? Ruo njikere. Ịghọ nro. Gbalịa ime ihe na-adịghị ọcha, enweghị m ike ikweta na ọ dịghị echiche gbasara nke a)) Kụkọta beets na carrots ọnụ. Poteto iche iche ...
Kedu ihe dị mma kabeeji?
Kedu ihe dị mma kabeeji? Njirimara bara uru nke oke ogwu mmiri na-eme ka a na-etinye aka na excretion nke radionuclides, ihe ndị na-egbu egbu, ígwè dị arọ; na-achịkwa ọgbụgba ọbara, na-eme ka cholesterol ọbara dị ala, ...
Kedu ka esi esi ghee eyịm ka ọ na-ada dị ka ibe? nkọwa n'ime
Kedu ka esi esi ghee eyịm ka ọ na-ada dị ka ibe? nkowa n'ime ime-acha eghe! NDỊ NA-EKWU NDỊ NA-EBE EBE ECHICHE: 150 nke eyịm 1 / 4 nke ọka wit a gwakọtara na-atọ ụtọ Nkwadebe: Bee, na-asa na finely gbanye yabasị ...
Ọ ga-ekwe omume mee ka mgwakota agwa si na mmiri na ntụ ọka ???
Ọ ga - ekwe omume ịme naanị mgwakota agwa naanị site na mmiri na ntụ ọka ??? ọ ga - ekwe omume, echefukwala itinye nnu ... ọ ga - aga maka noodles ... mana ọ ka mma na akwa))) ọ gaghị ekwe omume na - enweghị àkwá, ọ ga-ekewa, ee ...
Kedu ihe a ga-esi esi fennel mee ya?
kedu ihe enwere ike idozi site na fennel? Fennel casserole - fennel - 500g - tomato (buru ibu) - PC nke 3. - eyịm - PC nke 1. - anụ ezi - 50g - margarine - ...
gwa m anu anụ salad na mushrooms
gwa m salad nke beef anụ na mushrooms Meat salad na ndị ọkachamara 250 na mushrooms, 300 na veal, 1 yabasị, 1 Art. l ihe ọṅụṅụ lemon, ose, nnu. A na-edozi ọgwụ ndị na-edozi ihe n'ime efere, stew.
Kedu esi esi nri cheese chiri n'ulo?
Etu esi esi chiiz cremette n’ụlọ? Chọọ Internetntanetị maka otu esi eme Philadelphia cheese. Site na onwe m, enwere m ike ịsị na isi ihe isi ike n'ịchọta ude abụghị adịghị edozi ahụ. Ọfọn ...
Salad na imeju ume na karọt, esi esi esi nri?
Salad na imeju ume na karọt, esi esi esi nri? Salad nke imeju ọkụkọ na carrots Azụ mmiri, na-etinye na saucepan, wunye mmiri oyi, gbakwunye nnu, esi nri na okpomọkụ dị ọkụ ruo mgbe esie ya, ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,411.